Ikhilikithi laseNew Zealand likhansela ngokungazelelwe ukuvakasha kwePakistan ngenxa yezokuphepha
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Sports » Ikhilikithi laseNew Zealand likhansela ngokungazelelwe ukuvakasha kwePakistan ngenxa yezokuphepha
Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Izindaba Ezintsha ZaseNew Zealand • Izindaba • Izindaba ZasePakistan • Abantu • Unomthwalo wemfanelo • Ukuphepha • Sports • Ezokuvakasha • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje
I-Pakistan Cricket Board (i-PCB) ithe lolu hambo lukhanselwe "unilaterally" yi-NZC yize "kwenziwe amalungiselelo okuphepha angenangqondo" enzelwe lolu chungechunge, obekumele lube nemidlalo emithathu ye-One Day International eRawalpindi nama-T20 amahlanu edolobheni elisempumalanga ye Lahore.
Lolu hambo lumiswe imizuzu embalwa ngaphambi komdlalo wokuqala weqembu lasePakistan ePakistan eminyakeni engu-18.
Amabhodi ekhilikithi asePakistan naseNew Zealand athe umdlalo weRawalpindi ukhanseliwe ngenxa yesixwayiso sokuphepha.
UNdunankulu wasePakistan u-Imran Khan ukhulume nozakwabo waseNew Zealand uJacinda Ardern ngoLwesihlanu ukumqinisekisa ngokuphepha kweqembu.
Iqembu laseNew Zealand bekufanele libhekane nePakistan emdlalweni walo wokuqala emhlabathini wasePakistan iminyaka engu-18 edolobheni laseRawalpindi namuhla, kodwa lolu hambo lumiswe ngaphambi kokuqala komdlalo wokuqala, ngenxa 'yezinkinga zokuphepha' ezingacacisiwe.
Inkundla Yekhilikithi YaseRawalpindi
Ikhilikithi yaseNew Zealand (NZC) - ibhodi likazwelonke lezemidlalo - likhiphe isitatimende ngokungalindelekile esithi “liyalushiya” lolu hambo ngenxa yokuxwayiswa nguhulumeni kwezokuphepha kusele imizuzu embalwa ngaphambi kokuqala komdlalo.
“Kulandela ukwanda emazingeni osongo lukaHulumeni waseNew Zealand Pakistan, nezeluleko ezivela kubeluleki bezokuphepha be-NZC emhlabathini, kuthathwe isinqumo sokuthi iBlack Caps ngeke iqhubeke nalolu hambo, ”kusho isitatimende seNew Zealand Cricket.
"I-PCB izimisele ngokuqhubeka nemidlalo ebihleliwe," kusho isitatimende se-PCB. "Kodwa-ke, abathandi bekhilikithi ePakistan nasemhlabeni jikelele bazophoxeka ngalokhu kuhoxiswa ngomzuzu wokugcina."
UNgqongqoshe wezeMininingwane ePakistan, uthe uNdunankulu wasePakistan, u-Imran Khan, ukhulume nozakwabo waseNew Zealand uJacinda Ardern ngoLwesihlanu ukumqinisekisa ngokuphepha kweqembu.
"Esikhathini esifushane esedlule, uNdunankulu u-Imran Khan wayexhumana noNdunankulu waseNew Zealand futhi wamqinisekisa ukuthi iqembu laseNew Zealand linikezwa ukuphepha okungenangqondo ePakistan, futhi i-PCB ithe ithimba lezokuphepha laseNew Zealand nalo selizwakalise ukugculiseka amalungiselelo ezokuphepha ePakistan, ”kusho uNgqongqoshe Wezolwazi uFawad Chaudhry.
"Izinhlangano zethu zezobunhloli ziphakathi kwezinhlelo zezobunhloli ezisezingeni eliphezulu kakhulu emhlabeni futhi ngokusho kwazo iqembu laseNew Zealand alibhekene nengozi."
Esitatimendeni, uMphathi Omkhulu Wekhilikithi eNew Zealand, uDavid White, uthe bekungeke kwenzeke ukuqhubeka nalolu hambo njengoba kunikezwe izeluleko zokuphepha abezinikezwe.
I-NZC wabuye wathi kwenziwa amalungiselelo okuthi iqembu lekhilikithi labesilisa laseNew Zealand lihambe Pakistan.
Lesi senzo sizobonwa njengesiyimbi emizameni yeBhodi Yekhilikithi YasePakistan yokubuyisa ikhilikithi ephelele yamazwe onke ngamaqembu abuyele ePakistan, ngemuva kokuthi iqembu lakuleli liphoqeleke ukudlala ekudingisweni iminyaka eyisithupha kulandela ukuhlaselwa kweqembu lekhilikithi laseSri Lank ngo-2008 Lahore.
Sekusele imibuzo yokuthi ngabe iqembu lamadoda lekhilikithi laseNgilandi lizoqhubeka yini nezinhlelo zokuhambela ePakistan ngenyanga ezayo.